ဒီဇိုင်နာ / Animation မှ Erik Edmondson သည် Nashville တွင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူနှင့်ပူးပေါင်းမည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဒီဇိုင်နာ / အန်နီ Erik Edmondson Filmworkers Nashville ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ဒီဇိုင်နာ / အန်နီ Erik Edmondson Filmworkers Nashville ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
NASHVILLEâ€ "ဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ Erik Edmondson မှာဖန်တီးမှုအဖွဲ့ပူးပေါင်းထားပါတယ် Filmworkers, Nashville ။ အဘယ်သူ၏အလုပ်ကြော်ငြာ, ထုတ်လွှင့်ဒီဇိုင်း, ခေါင်းစဉ်ကုသမှုနှင့်ဂရပ်ဖစ်အထိချဲ့ Edmondson ၏ဆိုက်ရောက်, ၎င်း၏အမာခံ post ကိုထုတ်လုပ်မှုဟာယယဇ်ပူဇော်ဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်ကာတွန်းဖြည့်စွက်, Filmworkers န်ဆောင်မှုများရဲ့ menu ကိုချဲ့ထွင်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, တည်းဖြတ်, အရောင်ဆုံးမခြင်း, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနှင့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့များပါဝင်သည်အရာ ပြီး။
Edmondson ထားပြီး Tennessee ပြည်နယ်ထီနှင့် Nashville အေဂျင်စီအဆိုပါ Buntin Group မှသုံးခုအပြည့်အဝ-ကာတွန်းကားကြော်ငြာအပါအဝင် Filmworkers များအတွက်အများအပြားစီမံကိန်းများ, ပြီးစီးခဲ့သိရသည်။ သူလည်း Alameda ကနျြးမာရေးစနစ်နှင့် HealthSpring များအတွက်ထုတ်လုပ်အမျိုးအစားကာတွန်းများအတွက်စီးပွားဖြစ်ဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့က Filmworkers မှ Erik နှင့်သူ၏ artistry ဆောင်ကြဉ်းရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေ," ရောဘတ် Zimmerman, စက်ရုံရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူကပြောပါတယ်။ "သူကတသမတ်တည်းဖန်တီးမှုသေဒဏ်စီရင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပန်းခြံထဲကတာမျိုးအမြဲတမ်းအလုပ် client ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်စေရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ "
တစ်ဦးက Nashville ဇာတိ, Edmondson ကော်ပိုရိတ် client များ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာအေဂျင်စီအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အတိတ်နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ဦးအလွတ်တန်းဒီဇိုင်နာနှင့်တိရစ္ဆာန်များအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ သူ Verizon ကနှင့်ဘာမင်ဂမ်ကြော်ငြာတစ်ခုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအပါအဝင်အများအပြားစီမံကိန်းများ, Alabama အဘိဓါန်အေဂျင်စီ O2 အကြံပြုချက်များအပေါ် Filmworkers နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်သူကမကြာသေးမီက DNA ကိုကို Creative စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, Nashville, နှင့်၎င်း၏ client ကို Permobil အဘို့မိမိအလုပ်တခု Telly ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
Edmondson ရဲ့နောက်ခံကိုလည်းသူကသတင်း, အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးရှိုးပွဲအမျိုးမျိုးအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်မှာ Nashville ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာရုံ WKRN, များအတွက်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာနှင့်တိရစ္ဆာန်များအဖြစ် 10 နှစ်ပေါင်းပါဝင်သည်။ ဘူတာရုံနဲ့သူ့ရဲ့အချိန်အတောအတွင်းသူတကျိပ်သူဟာ Emmy အမည်စာရင်းနှင့်အတူ, Tennessee ပြည်နယ်ဖို့အတွက် Titans တွေကဂိမ်း၏ဘူတာရုံရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းလေးဒေသခံသူဟာ Emmy Awards ဆုပေးပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ငါ၏အ clients များဟာသူတို့ရဲ့ရူပါရုံကိုအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးနေအတိုင်း "ကျွန်မအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်စီမံကိန်းများကို၏မျိုးစုံစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်rewardingâ€ခဲ့", "Edmondson ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာလူတွေပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကူညီရန်ပျော်စရာပါပဲ။ "
Edmondson Filmworkers မှာသူ colorist ဂျင်မီ Cadenas ပါဝင်သည်သူဖန်တီးမှုအဖွဲ့သည်အခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ teaming အားဖြင့်ပိုကြီးပြီးပိုမိုရှုပ်ထွေးစီမံကိန်းများအပေါ်အယ်ဒီတာ, အာဒံ Little ကနှင့်အယ်ဒီတာ / အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအနုပညာရှင်တိ Moore ကယူနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်, အဲဒီကထပ်ပြောသည်။ "ကျနော်တို့ကမဆိုတာဝန်ကိုင်တွယ်ရန်ကိရိယာများနှင့်အခွက်တဆယ်ရှိသည်," ဟုသူကအလေးအနက်ဆိုသည်။ Edmondson ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကို Adobe AfterEffect, ရုပ်ရှင်ရုံ 4D စတူဒီယိုနှင့် XSI / SoftImage 3D ပါဝင်သည်။
ဤသည်နောက်ဆုံးပေါ်အပြောင်းအရွေ့ Filmworkers, Nashville အဘို့ခိုင်ခံ့တစ်နှစ် Caps ။ အဆိုပါစက်ရုံ Tennessee ပြည်နယ်ထီနှင့် Chinet အဘို့ကြော်ငြာအနိုင်ရတဲ့သူဟာ Emmy Award ဆုအဖြစ် TobyMac ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ဒါဟာတွင်မျက်လုံး (က Short Form ကိုဗီဒီယိုတစ်ချိုးငှက် Award ဆုရှင်), နှင့်အသီးသီး Blake က Shelton နှင့် Miranda လမ်းဘတ်အားဖြင့်ဗီဒီယိုများ, CMT ဆုချီးမြှင့်ဆုရရှိသူ, တစ်နှစ်တာ၏အမျိုးသားအဆိုတော်နှင့်တစ်နှစ်တာအမျိုးသမီးအဆိုတော်အဖြစ်။ မကြာမီကစီမံကိန်းများကို '' Garth Brooks ပါဝင်သည် Las Vegas မှကနေတိုက်ရိုက်လွှင့် DVD ကိုအယ်လ်ဘမ် topping သည်သူ၏ Billboard ဇယားတွင်ထည့်သွင်း ငါ့အမြစ်များပေါ်မှာအားလုံးအပြစ်တင် နှင့်ဆုကြေးငွေ DVD ကိုအဆိုပါပိုကောင်းသောရွိုင်း Orbison အယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူထည့်သွင်း နက်နဲသောအရာမိန်းကလေး.
Zimmerman ထပ်မံကြီးထွားယခုကြောင့်ဒီဇိုင်းနှင့်ကာတွန်းရောနှောထည့်သွင်းခဲ့ကြခန့်မှန်းထားသည်။ "ဒါဟာဒီစျေးကွက်အတွက်လိုအပ်ဖြည်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "Erik ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကျွန်တော်သူအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်တိရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆောင်တတ်၏အဘယ်အရာကိုပေါင်းစပ်အထူးသဖြင့်အခါ, Nashville နှင့်အရှေ့တောင်၌အကြှနျုပျတို့၏ client များနှင့်အတူငါတို့အဘို့အလမ်းသစ်တွေဖွင့်လှစ်။ ဒီဈေးကွက်ထဲမှာအဘယ်သူမျှမကအခြားအဆောက်အဦးများကသိမ်းပိုက်တဲ့အရပျသို့ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်လေ့မရှိ။ ကျနော်တို့တဦးတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာကအားလုံးကိုရှိသည်။ "
Filmworkers Nashville 1006 17 မှာတည်ရှိပါတယ်th ရိပ်သာလမ်းတောင်ပိုင်း, Nashville, Tennessee ပြည်နယ် 37212 ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, 615.322.9337 သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခေါ်ပါ www.filmworkers.com.
ကြော်ငြာ ကာတွန်း အသံလွှင်း ပုံစံ ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ် လူထု 2014-04-30
ယခင်: WHYY ProTrack ကိုပြန်လည်အကူအညီပေးမည်